Xaafadaha Fuqarada oo Ceeymis Dheeriya la Saaro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xaafadda Rinkeby iyo saadaalin shirkadda Folksam
Xaafadaha Fuqarada oo Ceeymis Dheeriya la Saaro
La daabacay torsdag 5 april 2012 kl 15.40
Mag-dhaw badan - saami sareeya. Mag-dhaw yar - saami hooseeya. Ma jiraan qiimeeyn kale ee aan miisaanka ku saarno dhankayaga. Jan Samuelsson, madax laameed shirkadda ceeymiska ee Folksam, isaga oo ka warramayay Fuqarada iyo xaafadaha ey ku badan yihiin ajaaniibta oo la saaro saami ceeymis dheeriya maadaama uu shirkadaha ceeymisku mag-dhow badan ku bixiyaan.
Bulshada ku dhaqan xaafadaha ey fuquradu ku nool yihiin sida Rosengård, Angered iyo Rinkeby. Aan haysan ceeymiska guryaha ee ururrada shaqaalaha ayaa bixiya saami ka baaxad ballaaran midka ey bixiyaan bulshada ku dhaqan nawaaxiyada kale ee dhaqanta, sida ku cad maqaal uu war-geeyska maalinlaha ee Metro ku bayaaniyay nuqulkiisii soo baxay maalintii isniinta bisha abriilna ahayd laba ee sannadka 2012.
- Kolka laga hadlayo shakhsiyaadka iyo ceeymiska, matalan guryaha waxey shirkadaha adeegyadaa ku howl-galaa mid walba goonidiisa u qiimaysaa kharashka ku baxa iyo kharashka maamulka ceeymiska ee tartanka suuqa furan ku dhaca halkaasina oo loo qiimeeyo koox koox, sida dhallinyarada oo dhibaatooyinka soo gaara isu dhigmaan. Waayeelka sidoo kale. Magaalooyinka waaweyn, kuwa dhexe iyo tuulooyinka iyo wixii la mid ah. Waana tallaabooyin siyaabo kala duwan loo qiimeeyo. Ma ahan waxa la qiimeeynayo shakhsiga aniga ama adiga. Waxa la qiimeeyaa waa ruuxu halka uu deggen yahay mitaal ahaan iyo da'diisa, sidaa waxaa sheegay Jan Samuelsson, madaxa laanta howlo ey ka mid yihiin ceeymisyada guryaha ee shirkadda ceeymiska Folksam oo aannu khadka telefoonka kula xiriirnay.
Qiimaha khidmadda ceeymisk ayaan ku xirnayn sida aad hadba u taxadar badan tahay , hase yeeshee ku xiran goobta uu hooyga aad deggen tahay ku yaal. War-geeyska Metro ayaa ka dalbaday afarta shirkadood ee ceeymiska dalka ugu waaweyn iney u soo ban-dhigaan ceeymisyada tusaale ahaan magaalooyinka Istockholm, Gothenburg iyo Malmö. Iyadoona uu baaritaankaa uga soo baxay in xaafadaha fakhiirtu ku badan tahay uu saamiga ceeymiskoodu ka badan yahay marka loo barbar-dhigo xaafadaha kale.
Afarta shirkadood ee war-geeysku tusaalaha u qaatay ayay ka mid tahay shirkadda ceeymiska ee Folksam, oo kharashkeedu dheer yahay 63%, halka uu Jan Samuelsson middaa ku macneeyay inuu falkaasi sababtiisa leeyahay. Mar uu middaa ka warramayayna wuxuu yiri:
- Waxaan tirakoob ahaan oran karaa in macaamiisha xaafadda Rosengård ay nagaga baxeen mag-dhow aad uga fara badan, marka loo barbar-dhigo degmada Äppelvik.
Iyadoona ey ugu wacan tahay in macaamiisha Rosengård ey la soo gudboonaadeen dhibaatooyin ey ka mid yihiin hooygooda oo la jabsado, jir-dil, caqabad safar ku gaadhay, dhibaato masuuliyadeed iyo waxyaalo kale ee fara-badan. Kuwaasina oo door ballaaran ka ciyaara qiimeeynta khidmadda maamulka ceeymiska.
Fikirkayaguna wuxuu ku dhisan yahay in halka ey nabarrada ugu badani ka dhacaan aan qidmaddana u kala qeybino.
Qiimaha ama darajada ceeymisku wuxuu ku saleeysan yahay hadba mag-dhawga kaga baxa shirkaddaha ceeymiska bulshada nawaaxigaa ku dhaqan iyo sidoo kale mustaqbalka sida la saadaalinayo in xaaladdu ku sugnaato.
In bulshada ku dhaqan xaafadaha Rinkeby, Angered iyo Rosengård bixiyaan qidmad saami ka badan ee maamulka ceeymiska ayuu ku tilmaamay Jan Olsson, ahna madaxa hayadda talo-bixinta macaamiisha ee ceeymisyada kala duwan in aanay ahayn mid lala fajaco. Hase yeeshee aaney xaaladdu weligeed sidaa ahaan jirin ee is-bedel lagu sameeyey wixii ka dambeeyey bilowgii sagaashameeyadii.
Waayadii hore waxaa jiri jiray mabda' lagu magacaabo saami caqli gal ah ee aan loo xukumi jirin intii la doono sida ay iminka tahay. Waxaannu ka hadleeynaa wixii ka horeeyey bilowgii sagaashameeyadii, sida uu sheegay Jan Olsson.
Iyada oo ay dhici karto inay waalidiinta qaarkood aaney awood u lahayn iney bixiyaan dhaqaalaha ceeymiska kana doortaan waxyaabaha daruuriga ah ee baahida dhallaanka quseeya, sida uu wargeeyska Metro wareeysi ku siiyay caalinka Torbjörn Hjort, ayaa haddana waxaa jira qaar badan ee ku dhaqan xaafadaha Rosengård, Angered iyo Rinkeby iney xubno ka yihiin ururrada shaqaalaha ee heshiiyada ceeymiska guryaha kula leh shirkadaha ceeymiska ee waaweyn. Taasina oo u sahleeysa in qiimaha hoos loo dhigo maadaama ey iska saacidayaan xubnuhu iyada oo aan loo kala aaba-yeeleyn halku uu shakhsigu ku dhaqan yahay. Jan Samuelsson, Jan Olsson iyo mar kale sida ey u kala horeeyaan.
- Heshiiska ceeymiska ururka shaqaalaha ee guryaha tusaale ahaan. Halkaasina oo si siman loo qeeybsado.
- Marka laga hadlayo ceeymis-wadareedka waxaa la qaybsan karaa khatarta iyo saamiga ceeymiska. Waana mid u suurtagelinaya shakhsiga ku dhaqan xaafadahaa inuu ku soo beegmno saami ka yar, middii uu bixin lahaa haddii uu isla xaafaddaa kelinimo uu ceeymis u galo. Halka sidoo kale ruuxii doonaya isaga oo ururka ka tirsan inuu kelinimo ceeymis u saxiixdana waa mid u furan, haddii uu is leeyahay xaafadda aad ku dhaqan ahay waxyaabo sidaa u weyn kama dhacaan, mana aan doonayo inaan xaafado kale wax la qeeybsado.